मनोरञ्जन – Page3– Light Nepal
राजेश हमाल ‘प्रेम गीत ३’ मा नखेल्ने, निर्मातालाई दिए यस्तो जवाफ
June 18, 2019 June 18, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on राजेश हमाल ‘प्रेम गीत ३’ मा नखेल्ने, निर्मातालाई दिए यस्तो जवाफ
काठमाडौं, ३ असार । माहानायक राजेश हमालले ‘प्रेम गीत ३’ मा अभिनय नगर्ने भएका छन् । उनले सो फिल्ममा खेल्ने भनिएको कुरा हल्ला मात्र सावित भएको छ। विभिन्न समाचार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा राजेश हमाल सो फिल्ममा अभिनय गर्न लागेको बताइएको थियो । हमालले फिल्ममा नायक प्रदीप खड्काको पिताको भूमिका निर्वाह गर्ने समाचार बाहिर आएको […]
सनी देओल र शाहरुख खान किन १६ वर्ष सम्म बोलेनन् ? फिल्मको सेटमा सनीसंग डराउँथे शाहरुख र यश चोपडा
June 18, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on सनी देओल र शाहरुख खान किन १६ वर्ष सम्म बोलेनन् ? फिल्मको सेटमा सनीसंग डराउँथे शाहरुख र यश चोपडा
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता तथा सांसद सनी देओल र शाहरुख खानबीच १६ वर्ष देखि बोलचाल बन्द थियो । उनीहरु एक अर्कालाई नदेखेजस्तो गरी तर्किन्थे । बोलचाल बन्द भएको १६ वर्षपछि सनी देवलले अहिले त्यसो गर्नुको रहस्य खोलेका छन् । सनीका अनुसार यो झगडा फिल्म ‘डर’ को सेटबाट सुरु भएको थियो । डर फिल्म पछि सनीले […]
June 13, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on प्रनेश थुना प्रकरण : अरु कलाकार चुप भएको बेला केकी अधिकारीले भने मुख खोलिन्
काठमाडौं, ३० जेठ । फिल्म ‘वीरबिक्रम २’को फरक तरिकाले समीक्षा गर्दा थुनामा परेका प्रनेश गौतम प्रकरणबारे चर्को बहस चलिरहेका बेला कलाकारहरु भने प्रतिकृया बिहिन भएर बसेका छन् । नेपाल चलचित्र कलाकार संघ समीक्षाको विरोध गरेको भएपनि कलाकारहरुले आफ्नो राय भने ब्यक्त गरेका छैनन् । फिल्मको समिक्षाका क्रममा कलाकारलाई लिएर गरिएको टिप्पणीमा कतिपयको आपत्ति छ। निर्देशकले […]
पुण्यतिथीमा प्रियंकाले आफ्नो बुवालाई सम्झेर भावुक भएपछि ससुराले देखाए यस्तो माया
June 12, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on पुण्यतिथीमा प्रियंकाले आफ्नो बुवालाई सम्झेर भावुक भएपछि ससुराले देखाए यस्तो माया
एजेन्सी । सोमबार बलिउड नायिका प्रियंका चोपडाका पिता अशोक चोपडाको छैटौं पुण्यतिथी थियो । उनी बुवालाई सम्झेर भावुक बनिन् । बुवालाई गुमाउनुपर्दाको ६ वर्षको पीडा उनले समाजिक सञ्जालमा लेखिन् । बुवालाई स्मरण गर्दै उनले इन्स्टाग्रामा एउटा भावुक पोष्ट गरेकी थिइन् । उक्त पोष्टमा उनका ससुरा पल केविनले उनलाई सान्त्वना दिँदै मायालु मेसेज लेखेका छन् । […]
June 7, 2019 Srijana AcharyaLeaveaComment on नेहा कक्कड आज काठमाडौं आउने, ठमेलमा यस्तो यस्तो छ उनको कार्यक्रम
काठमाडौं, २४ जेठ । बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कड आज काठमाडौं आउँदै छिन् । भोलि शनिबार ठमेलस्थित लर्ड्स अफ ड्रिङ्स (एलओडी) मा आयोजना हुने नेहा कक्कड लाइभ कन्सर्टमा सहभागी हुन उनी शुक्रबारै काठमाडौं आउने भएकी हुन् । उनका साथमा इन्डियन आइडल सिजन–१० का दुई प्रतिभाशाली गायक विभोर परासर र कुणाल पण्डित पनि आउँदै छन् । […]
June 6, 2019 Gyanendra KoiralaLeaveaComment on गायिका अन्जु गौतमको यसपालिको तीजको कोसेली सार्वजनिक “माईतीको घरमा दर पाक्यो”
इटहरी। भनिन्छ, हरेक बिहानीले दिनको संकेत गर्छ, हुने विरुवाको चिल्लो पात हुन्छ । यी भनाई ठ्याक्कै मिल्छन् गायिका अन्जु गौतमको सांगीतिक जीवनसँग । सानैदेखि गायन प्रतिभा थियो । गीतसंगीतप्रति तीव्र लगाव राख्थे, हर हमेशा गीत गुनगुनाउँथिन् गायिका अन्जु गौतम; पूर्वी नेपालको तेह्रथुम जिल्लामा जन्मनु भएकी सांगीतिक आकाशका चमकिला तारा गायिका अन्जु गौतम सांगीतिक फाटमा धेरै पहिला […]